Ya bụ nnukwu echichi bụ nke ndị obodo Enugwu-Ukwu niile zukọtara wee chibe ya, bụkwa nke e mere site n'aka eze ọdịnala obodo ahụ, bụ Igwe Ralph Ekpe. Nke a bụ nke e mere na mmemme Ịgụ Arọ nke iri isii, bụ otu n'ime nnukwu mmemme pụrụ iche e jiri mara ndị obodo ahụ, ma bụrụkwa nke weere ọnọdụ obi eze dị n'Obu Ụmụnri n'okpuru ọchịchị Njikọka nke steeti Anambra.
Mmemme ahụ bụ nnọọ nke kpoghaara ọkụ site n'iji ọtụtụ ọnụ mkpọala dara ụda nke ukwuu wee sị Igwe Ralph na ndị ichie ya 'nnọọ' dịka ha ji Ịgba Eze na egwu Ufie wee na-abata. Ngwa ngwa nke ahụ gasịrị, ịgọ na ịwa ọjị sochiri, bụkwa nke e butere site n'aka ndị Iyom, Otu Odu na Eze, bụ ndị nwunye Igwe duru wee bịa.
Ka ọ na-echibe Dọkịnta Okeke ya bụ echichi, Igwe Ralph kọwara ya dịka nwoke nwere obi umeala na onye metagooro obodo ahụ ọtụtụ ihe otutu n'ụzọ dị iche iche, ma mee ka a mara na echichi ahụ bụ nnọọ nke kwesiri ekwesi maka na ọ bụ ihe onye na-eme ka obodo ji ekwupuru ya.
Nwunye Dọkịnta Okeke, bụ oriakụ Oby Okeke bụkwa onye a nọrọ n'otu oge ahụ chibe echichi dịka "Anya Di Ya" n'ihi ọtụtụ ụzọ dị iche iche o si akwàdo di ya n'ihe dị iche iche ọ na-eme.
Ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu oge ọ natachara ya bụ echichi, Dọkịnta Okeke gosipụtara obi añụrị ya banyere ya bụ nnukwu nkwanye ugwu ma kọwaa ya dịka ụzọ e si eme ka ihe nna ha lagoro mmụọ mepụtara dịgide. O kelere Chineke nna na ndị obodo ahụ maka nke ahụ, ma kpọkuziekwa ụfọdụ ndị mmadụ ndị na-ahụta ụdị ihe ahụ dịka ikpere arụsị ma ọ bụ omenala rụrụ, ma dụọ ha ka ha kwụsị nke ahụ n'ihi ihe ahụ bụ nnọọ ezigbo omenala Igbo kwesiri ka a na-akwalite ya nke ukwuu na oge niile.
N'okwu nke ha n'otu n'otu, oriakụ Oby Okeke na nwanne Nkem Okeke bụ maazị Emeka Okeke kwuru na echichi ahụ bịara nnụụ n'oge kwesiri ekwesi ma sịkwa na ezinaụlọ ndị be Okeke niile jiri obi ụtọ wee na-anabata nke ahụ.
Ndị ukwu ndị ukwu sonyere na mmemme ahụ gụnyere osote gọvanọ steeti Imo, ogbo ya nke Enugu nakwa nke Ebonyi, ndị selitere isi n'otu pati APGA, otu onye ụlọ ọgbakọ omebe iwu etiti bụ sinetọ Ben Obi, maazị Victor Oye, onyeisi ụlọ mgbasaozi ABS bụ nze Uche Nwọra na ọtụtụ ndị ọzọ.